Tag: faira kugovana | Martech Zone
Tag: faira kugovana
Chishanu, June 8, 2018 Mugovera, June 9, 2018 Douglas Karr
Bhokisi, Dropbox, Google Drive… nevatengi vakawanda kudaro vachishandisa mapuratifomu akasiyana, maforodha evatengi idambudziko. Kamwe chete pasvondo kana zvakadaro, ini ndinofambisa data rangu rese remutengi kune rakarongedzwa uye rakarongeka network share inotsigirwa. Zuva nezuva, zvakadaro, yanga iri njodzi kuedza kutsvaga nekutumira mafaera… kusvika zvino. Watinoshanda naye agency anoshandisa Droplr. Kuzeza kutora imwezve faira yekugovana, ini handina kutengeswa pakutanga. Zvisinei, nekufamba kwenguva
Chipiri, June 5, 2012 Chipiri, June 5, 2012 Marty Thompson
Wakambonzwa kumanikidzwa pakutumira makuru mafaera eruzivo kune ese tarisiro, vatengi kana bhizinesi vanobatirana? FTP haina kumbobvira yabatwa senge inozivikanwa kana mushandisi-inoshamwaridzika sarudzo, uye zvinongedzo zveemail zvine zvavanogumira uye zvipingaidzo. Kugovera madhairekitori mukati memafaira emafaira akaganhurirwa kuwana uye kuita basa rakawanda rezvikwata zveIT zvemukati. Kumuka kwegore komputa izvozvi kunopa mhinduro iri nyore, uye pakati pezvakasiyana zvegore zvakapihwa zvipo zvinobvumidza kuchengetedza, kubata uye kugovana
China, May 17, 2012 Svondo, October 4, 2015 Marty Thompson
Kuburitsa kunze kana kuronga mushandirapamwe wekushambadzira unosanganisira manejimendi manejimendi uye kubatana mabhodhoro. Ini ndinobheja iwe unoguta nekuita shanduko isingaperi kuVPN kana firewall kumisikidza kuita kuti kuwedzere kubatana. Mikana ndeyekuti urikushandisa chero isingachashandi intranet kana SharePoint. Kuchinjira kune yakasarudzika chiitiko icho gore rakavakirwa Huddle nzvimbo yekushandira inopa zvinogona kuita kubatana uye manejimendi manejimendi chiitiko chinonakidza kwete pane chinonetesa uye chekuputsika kwetsinga.